२०७४ फागुन १७ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
राष्ट्र बैंकले ८ वर्षदेखि भारु नदिए पनि मनी चेन्जरहरू सञ्चालनमा
प्रस, वीरगंज, १६ फागुन/ राष्ट्र बैंकले करिब ८ वर्षदेखि मनी चेन्जरहरूलाई भारु सटहीको लागि एक रुपियाँ नदिए पनि वीरगंजलगायत ठाउँमा मनी चेन्जरहरू निर्वाध सञ्चालनमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा मनी चेन्जरहरूले वार्षिक संस्था नवीकरण गराउँदै सञ्चालनमा ल्याइरहेका छन् । पर्सा, बारा र चितवनमा गरी २६ वटा मनी चेन्जर छन् । बारा र चितवनमा १–१ वटा र बाँकी सबै वीरगंजमा छन् । वीरगंजमा रहेका मनी चेन्जर एसोसिएशनका अध्यक्ष पवन गुप्ताले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार मनी चेन्जर सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले भारुको नाममा आठ वर्षदेखि एक पैसा नदिए पनि बजारबाट सङ्कलन गरेर कारोबार गर्दै आएको बताए । राष्ट्र बैंकले ८ वर्षदेखि यी सटही काउन्टरहरूलाई भारु रकम उपलब्ध नगराए पनि वार्षिकरूपमा संस्था दर्ता गर्नुको कारण पनि खुलेको छैन । संस्था दर्ता गराउन आउनेको दर्ता गर्दै आएको बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार भारु सटही गर्दा सयकडा ४० पैसाभन्दा बढी लिन पाइन्न । तर भारुको अभाव भइरहेको बेलाा विगतमा रु १० प्रति सयकडा र अहिले २–३ प्रति सयकडा सटही गरेबापत मनी चेन्जरहरूले लिने गरेका छन्
प्रदेश नं. २ को मन्त्री विस्तार, थपिए चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री
प्रस, परवानीपुर, १६ फागुन/ प्रदेश नं. २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । दोस्रोपटक विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा फोरमबाट दुई मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री एवं राजपाबाट दुई मन्त्री गरी पहिलेको तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सातजना थपेर १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । फोरमबाट ज्ञानेन्द्र यादव आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह), शैलेन्द्रप्रसाद साह भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारी, राजपाबाट नवलकिशोर साह सामाजिक विकास र रामनरेश रायले उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीहरूमा सरोज सिंह गृहराज्य, उषाकुमारी यादव अर्थ, योगेन्द्र राय यादवले भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको शपथ लिए । राजपाबाट राज्यमन्त्रीमा नाम पठाइएको छैन । मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले एक समारोहबीच जनकपुरमा नवआगन्तुक मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । सो अवसरमा अर्थमन्त्री विजय यादव र भौतिक विकास तथा योजनामन्त्री जीतेन्द्र सोनललगायतको उपस्थिति थियो । मन्त्री सोनलले बिरामीलाई फलपूmल बाँडे प्रदेश नं. २ का भौतिक
होली ः विगत र वर्तमान
सञ्जय साह मित्र होली अब करिब विश्वभरि मनाइन थालिएको छ । मुख्यतः भारत र नेपालबाट विश्वभर छरिएका हिन्दू, जैन तथा सिख धर्मावलम्बीले होली मनाउने गरेका छन् । होली मान्ने मुख्य क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अन्य धार्मिक समुदायजस्तै क्रिस्चियन र मुस्लिमले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा होली मान्न थालेका छन् । होलीप्रतिको सद्भाव बढेको देखिएको छ र यो बढदै जाने क्रम पनि निरन्तर बढिरहेको छ । एक अर्काको चाडपर्वलाई सम्मान गर्ने संस्कार नेपालीहरूमा निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । होलीको समयमा पनि यो सद्भावमा वृद्धि भएको देखिएको छ । होली यथार्थमा धेरैको साझा पर्व बन्दै गएको पनि यथार्थ नै हो । होलीलाई पुराणसित जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ । पुराणमा वर्णित कथामा होलिकाले प्राप्त गरेको वरदानको दुरुपयोग गरेपछि अग्निमा आफैं खरानी हुनुपरेको थियो, जबकि उसलाई आगोमा नडढने वरदान प्राप्त थियो । होलिका अलि खराब स्वभावकी थिइन् र खराब स्वभावका मानिसलाई सहयोग गर्ने गर्दथिइन् । होलिका डढेर खरानीमैंं परिणत भएपछि धेरैले यसलाई निकै शुभ माने, उत्सव मनाए । त्यो फागुन महिनाको पूर्णिमाको दिन थियो । अर्को वर्ष फेरि फागुन महिनाको पूर
अचेल जुन चाड पनि मर्यादापूर्वक मनाउन आग्रह गरिएको विज्ञप्ति, सभा–गोष्ठी आदिको माध्यमबाट सुन्न पाइन्छ । चाडपर्व भनेको नै रमाइलो गर्ने, खानेपिउने अवसर हो । यसमा मर्यादा रहेन भने न संस्कृतिको जगेर्ना हुन्छ, न सभ्यताको दिग्दर्शन पाइन्छ । अनि किन मर्यादापूर्वक चाड मनाउने आग्रह गरिन्छ ? किनभने हाम्रा प्रायः सबै चाडपर्वमा कृत्रिमताको समावेश हुँदै गएको छ । कृत्रिमताले विकृति र विसङ्गति निम्तिइरहेको छ । यसले सामान्यजनमा चाडपर्वप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । परिवारमा कसैले चाडलाई रमाइलो मान्ने, कसैले उपेक्षा गर्ने हुँदा चाडको समग्र आनन्द मर्छ । किन कुनै पनि चाडपर्वमा विकृतिको प्रवेश भइरहेको छ ? किन हामीले मनाउने सबै चाडबाट शास्त्रीय–बोध गुम्दै गइरहेको छ ? किनभने हामीमा पुस्तान्तर फराकिलो गरी झाङ्गिदै गएको छ । एउटा पुस्ता छ जो परम्परामा कुनै पनि प्रकारको खलल चाहँदैन, अर्को पुस्ता छ जो सबै गतिविधिमा आधुनिकताको रङ्ग छर्न चाहन्छ । यहींबाट विभिन्नता प्रकट हुन्छ र एकथरी नियास्रिन थाल्छ । हिन्दू धर्मलाई सनातन भनिएको छ । सनातन अर्थात् जुन निरन्तर छ र रहिरहने छ । यसका लागि परिवर्तनको खाँचो पर्दछ
२०७४ फागुन १६ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
नाउक्षे अस्पतालमा छडकेः ६४ जना चिकित्सक, कर्मचारी अनुपस्थित
प्रजिअ सिंहले वीरगंज छपकैयामा सञ्चालित यतिमखाना तथा बिर्तामा रहेको बालगृहको अवलोकन गरेका छन् । बाल कल्याण समितिको अगुवाइमा अनुगमन गर्दा यतिमखानाको अवस्था गम्भीर रहेको र सात दिनभित्र सुधार गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई निर्देशन दिएका छन् । यतिमखानामा ४ देखि १६ वर्षका केटाहरू आवासीय अध्ययनरत रहेका र उनीहरूको खाना र बस्ने व्यवस्था उचित नभएको भन्दै सुधार गर्न प्रजिअले निर्देशन दिएका छन् । यतिमखानामा अहिले पनि बालबालिका भुइँमा सुत्ने, खाना स्तरीय नभएको र उच्चस्तरको शिक्ष्Fा नपाएकोले सुधार गर्न निर्देशन दिएको बताए । त्यसैगरी बालगृहमा अनुगमन गर्दा २७ जनाको खर्च नेपाल सरकारले दिइरहेकोमा ९ जना बालबालिका रहेको जानकारी पाए । बालगृहको अवस्थामा पनि कमजोरी भएको, सरसफाइको कमी रहेको भन्दै सुधारको लागि प्रजिअले निर्देशन दिएका थिए । प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी अस्पतालमा नआई घर वा निजी क्लिनिकमा बसेर सरकारी तलब भत्ता लिदै आएका छन् । अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक, सिएमएम, अहेब, अनमी, स्टाफ नर्स र अन्य शाखामा कार्यरत कर्मचार
सिम्रौनगढ नपाको प्रथम नगरसभा सम्पन्न
प्रस, सिम्रौनगढ, १५ फागुन/ सिम्रौनगढ नगरपालिकाको प्रथम सभा आज कङ्काली मावि सिम्रौनगढमा सम्पन्न भएको छ । आज सम्पन्न नगरसभाले आव २०७४–२०७५ को लागि रु ४५ करोड, १६ लाख ११ हजार ६ सयको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बारा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उमाकान्त चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा शुरु भएको नगरसभामा प्रमुख अतिथिले सिम्रौनगढलाई सदैव ऐतिहासिक स्थलको रूपमा विकसित गर्न तयार रहेको र जनसहयोगको अपेक्षाबारे आप्mनो वक्तत्व राखेका थिए । विकास कार्य अन्तर्गत १५ शøयाको अस्पताल, एम्बुलेन्स र प्राविधिक शिक्ष्Fाको क्षेत्रमा व्यापक विकास गर्न व्यवस्था मिलाइरहेको उनले बताए । कार्यक्रमका अर्का विशिष्ट अतिथि राजपाका केन्द्रीय नेता जितेन्द्र सिंहले सिम्रौनगढ नगरपालिकाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस किसिमको बजेट सार्वजनिक गरेको बताए । उनले सिम्रौनगढ र यहाँको जनता समृद्धिको बाटो पर्खिरहेको बताए । कार्यक्रममा २५ जना शहीद परिवार, ज्येष्ठ नागरिक तथा विभिन्न सेवामा योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बजेटबारे बाराका निमित्त प्रजिअ मुकेश केशरी, नेकाका चन्द्रशेखर
वीरगंज जेसिजको आयोजनामा सुपर –६ क्रिकेट प्रतियोगिता
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ वीरगंज जेसिजको आयोजनामा अन्तर्विद्यालय सुपर सिक्स क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । नारायणी रङ्गशालाको क्रिकेट मैदानमा आयोजित सुपर सिक्स क्रिकेट प्रतियोगिताको खेलकुद विकास समितिका कावा अध्यक्ष्F निशान्त लामिछानेले उद्घाटन गरेका थिए । वीरगंज जेसिजका अध्यक्ष्F दिलीप ढुङ्गेलको अध्यक्ष्Fतामा सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा वीउवासङ्घका कावा अध्यक्ष्F गोपाल केडिया, ज्येष्ठ नागरिक सङ्घका अध्यक्ष्F पशुपति विक्रम शाह, समाजसेवी उषा शाह, नेरेसो पर्साका उपाध्यक्ष्F मधु राणा, पर्सा क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष्F दाउद अन्सारी, विक्रम शाह, मुर्तजा हवारीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। प्रतियोगितामा वीरगंजका ६ वटा स्कूल सहभागी भएको वीरगंज जेसिजका पूर्व अध्यक्ष सन्तोष खनालले बताए । आज सम्पन्न सुपर सिक्स प्रतियोगितामाको उपाधि सगरमाथा एकेडमीले जितेको छ ।
प्रादेशिक राजधानीको राजनीति र वीरगंज
श्रीमन्नारायण देशको प्रमुख आर्थिक नगरी, औद्योगिक करिडोर तथा सम्पूर्ण भौतिक सुविधाले परिपूर्ण वीरगंज प्रादेशिक राजधानी मात्रै होइन, देशकै राष्ट्रिय राजधानी बन्न सक्ने क्षमता र हैसियत राख्दछ, तर राष्ट्रिय राजधानी सार्न सकिंदैन किनभने यो ऐतिहासिक र प्राचीन स्थलको रूपमा प्रख्यात भइसकेको छ । प्रादेशिक राजधानीको सन्दर्भमा वीरगंजको अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन, तर पनि धार्मिक नगरी जनकपुरधामलाई प्रदेश नं. २ को राजधानी बनाइएको छ । वीरगंजको उपेक्षा गरी जनकपुरधामलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइएकोमा वीरगंजको मुख्य चोकमा महिनौदेखि रिले अनशन जारी छ । यस अनशनको औचित्यको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू हावामा तैरिइरहेका छन् । प्रथमतः वीरगंज सम्पूर्ण तराईको मध्यबिन्दु अवश्य हो । सम्पूर्ण तराई मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाइँदा वीरगंज अवश्य पनि प्रादेशिक राजधानी बन्न सक्दथ्यो । ८ जिल्लाको मात्रै प्रदेश भए पनि वीरगंज देशका अन्य सातवटै प्रादेशिक राजधानीभन्दा सक्षम र उपयुक्त स्थल साबित हुन सक्दछ । वीरगंजसित न्याय भएको छैन, तर वीरगंजको विकासमा यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि र देशका राजनीतिक दलहरूका जिम्मेवार नेता
यद्यपि निर्वाचन समाप्त भएको महिनौं बितिसकेको छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसको अरण्यरोदन अहिलेसम्म सकिएको छैन । निर्वाचनताका त ठीकै थियो, देशका तीन ठूला राजनीतिक शक्तिमध्ये दुई ठूला वामशक्ति मिले र गठबन्धन बनाए । निर्वाचनको बेला भएको गठबन्धनले वामइतर पार्टीलाई असर पर्ने निश्चित थियो, त्यसमा रोइ–कराइ गर्नु स्वाभाविक थियो । तर अहिले पनि वाम एकताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनौती हुनु, यस अर्थमा कि त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तित्वमा असर पुग्छ भनी ठान्नु चाहिं अकर्मण्यताको हद हो । विपक्षी बलियो भएकोले मेरो प्रयास असफल हुन्छ भनी सोच्नु स्वाभाविक हो, र विपक्षीको सामु सक्षम भएर उभिनु पुरुषार्थ हो । विपक्षीलाई आपूmभन्दा कमजोर बनाउन विलाप गर्नु, आपूmलाई बढी सबल र सक्ष्Fम बनाउनुको साटो विपक्ष्Fीलाई निस्तेज बनाउने कुचक्र गर्नु, मानवलाई सुहाउने काम पटक्कै होइन । मानिसले गर्न सुहाउने भनेको सृजना हो, विध्वंस होइन । अरूभन्दा आपूm राम्रो, शक्तिशाली बन्नु वा बन्ने चेष्टा गर्नु सृजना हो भने विभिन्न षडयन्त्रद्वारा अरूलाई आपूmभन्दा कमजोर तुल्याउनु भनेको विध्वंस हो । नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि राजनीतिक दलभन्द
२०७४ फागुन १५ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
वाम गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेससामु चुनौती गुट–उपगुटले पार्टीको अस्तित्व दाउमा–गच्छदार
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रम विजय गच्छदारले कम्युनिस्टहरूको एकताले काङ्ग्रेसका सामु ठूलो चुनौती तेर्सिएको बताएका छन् । नेका पर्साले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता गच्छदारले दुई ठूला कम्युनिस्ट दल मिलेर बनाएको वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारबाट लोकतन्त्रलाई पनि खतरा रहेको बताएका छन्। खतरामा परेको लोकतन्त्रलाई बचाउने जिम्मा अब काङ्ग्रेसको काँधमा आएको भन्दै गच्छदारले भने–“काङ्ग्रेसका सामु अब ठूलो चुनौती छ, अबको समय काङ्ग्रेसका लागि अत्यन्त अप्ठ्यारो पनि छ, त्यसैले पार्टी भित्रको गुट–उपगुट र आन्तरिक मतभेद खत्तम गरेर एक ढिक्का भएर अगाडि बढनु जरुरी छ।” उनले पाँच वर्षभित्र काङ्ग्रेसलाई पुरानै स्थानमा फर्काउन मिशन लिएर अगाडि बढिरहेको बताए । पार्टीको संसदीय दलको नेता गुट–उपगुटमा लागेर नभई सर्वसम्मतिको आधारमा चयन गर्नुपर्ने पक्षमा आपूm रहेको भन्दै नेता गच्छदारले संसदीय दलको नेता बन्ने आकाङ्क्षी शेरबहादुर देउवा, शशाड्ढ कोइराला र प्रकाशमान सिंहसँग परामर्श गरिरहेको बताए। कम्युनिस्टहरूको एकताले लोकतन्त्र खत
प्रेस चौतारी, पर्साको आयोजनामा होली मिलन समारोह राजधानी बनाउन फोरम नेपाल इमानदार छ– यादव
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ सांसद प्रदीप यादवले प्रदेशको राजधानी वीरगंज बनाउने कुरामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल इमानदार रहेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल, पर्साले आवाज एफएममा आयोजना गरेको फागु मिलन समारोहका प्रमुख अतिथि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, पर्साका अध्यक्ष एवं सांसद यादवले प्रदेशको राजधानी वीरगंज बनाउने कुरामा फोरम नेपाल इमानदार रहेको र त्यस्तै इमानदारिता काङ्ग्रेस, एमाले, राजपा, माओवादीबाट चाहेको बताए। उनले मुख्यमन्त्रीसमेतले प्रदेशको राजधानी वीरगंज बनाउने कुरामा मतदान गर्ने दाबी गरे। मुख्यमन्त्रीको मतको जिम्मेवारी स्विकार्दै उनले अन्य पार्टीले आआप्mनो मत प्रदेशको हकमा वीरगंजमा दिने हो भने भोलिको दिनमा राजधानी वीरगंज हुने बताए। सांसद यादवले नेका सरकारले अस्थायी राजधानी जनकपुर तोकेको र अब दुईतिहाई बहुमतबाट मात्र राजधानी परिवर्तन गर्न सकिने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएकोले राजपा, एमाले, नेका, माओवादीलाई प्रदेशको राजधानी वीरगंज बनाउने कुरामा एक ढिक्का भएर मतदान गर्न आह्वान गरे। सांसद यादवले २ नं. प्रदेश आर्थिक रूपमा पिछडिएकोले अबको दिनमा सबै राजनीतिक आग्रह–पूर्वा
रिले अनशन फागु पूर्णिमापछि
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ प्रादेशिक राजधानी वीरगंज हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत वीरगंज सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा आज पनि बिहान १० बजेदेखि रिले अनशन भयो। एमाले नेता धु्रव कुशवाहाको नेतृत्वमा रिले अनशन भएको थियो। वीरगंज सङ्घर्ष समितिका सदस्य कुशवाहाले आज बिहान १० बजेदेखि ६ बजेसम्म र ६ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म अनशन जारी रहने र त्यसपछि अनशन स्थगित हुने बताए। उनले फागु पूणर््ीिमाको कारण १५ गतेदेखि अनशन स्थगन गरिने सङ्घर्ष समितिले निर्णय गरेको जानकारी गराए । फागु पूर्णिमा सकिनासाथ रिले अनशनले पुनः निरन्तरता पाउने उनले बताए। प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै वीरगंज सङ्घर्ष समितिले पुस २१ गतेदेखि रिले अनशनलगायत कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
महिलाहरू सीपमूलक भए घरेलु हिंसा न्यूनीकरण– प्रउ डा. रेग्मी
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ जिप्रका, पर्साका प्रहरी उपरीक्षक डा. गणेश रेग्मीले महिलाहरू सीपमूलक भए आत्मनिर्भर हुने र घरेलु हिंसा न्यूनीकरण हुने बताएका छन्। सोमवार सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र मुर्लीले प्रहरी मेरो साथी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल महिला कल्याण संस्था पर्सासँग समन्वय गरी १५ दिने सर्पm बनाउने तालिमको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। प्रउ रेग्मीले सीपमूलक तालिम सिकेर व्यवसाय गर्दा महिलाहरू आर्थिकरूपमा सशक्त भई घर व्यवहार चलाउन सक्ने कुरामा जोड दिए। कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ पर्साका अध्यक्ष पशुपति विक्रम शाह, प्रतीक दैनिकका प्रधानसम्पादक जगदीश शर्मा, नेपाल महिला कल्याण संस्थाकी अध्यक्ष रेखा घिमिरे, दिलीप प्रधान, शीला गौतम, सिन्धु मल्ललगायत केन्द्रका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। सामुदायिक सेवा केन्द्र मुर्लीका अध्यक्ष राम सर्राफको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा ५० जना महिलाले प्रशिक्ष्Fण लिने बताइएको छ।
निनपाको बस्तीहरूमा कुष्ठरोग निवारण अभियान
प्रस, निजगढ, १४ फागुन/ निजगढ नगरपालिकाले १३ वटै वडामा कुष्ठरोग निवारण अभियान चलाउने भएको छ। सोमवार निजगढ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा निजगढले सञ्चारकर्मीहरूलाई अभियानबारे जानकारी दिएको छ। जिल्लास्तरीय कार्यक्रम अन्तर्गत निजगढ नगरका बस्ती/बस्तीमा यही फागुन २० गतेदेखि २४ गतेसम्म घर दैलो गरेर कुष्ठरोगीको पहिचान गरिने निनपा स्वास्थ्य शाखाका संयोजक रमेश लामाले बताए। यो रोग लागेमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म नियमित औषधी सेवन गर्दा रोग पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउने निनपा स्वास्थ्य शाखाका संयोजक रमेश लामा र शाखा सदस्य एवं स्वास्थ्यकर्मी मणीश्वर घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिए। “कुष्ठरोग कुनै जुनीमा पाप गरेबापत लाग्ने रोग हो भन्ने अन्धविश्वास अहिले पनि समाजमा व्याप्त छ। कतिपयले रोग अझै लुकाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । यद्यपि यसले उनीहरूलाई नैं हानि हुन्छ। त्यसैले बेलैमा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा आई उपचार गराउनुपर्छ ”— स्वास्थ्यकर्मी लामा र घिमिरेले भने। यो रोग सामान्यजस्तो देखिए पनि रोगले सङ्क्रमण गरिरहँदा अन्तमा ज्यानै जानेसम्मको खतरा हुन्छ। त्यसैले रोग लुकाउनुभन्दा समयमैंं उपचार गर
नेपाल सरकारको यातायात विभागले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायातका साधन हटाउने निर्णय गरेको छ। यसै फागुन मसान्तभित्र ती सवारीका साधनहरू हटाउनुपर्ने उर्दी जारी भइसकेको छ। यो राम्रो पाइला हो। धेरै पुराना सवारी साधनहरू चलाउँदा त्यसबाट राज्यलाई निकै हानि नोक्सानी पुग्ने गरेको छ। पुराना गाडीहरूले इन्धन बढी खाने, धूवाँ बढी ओकल्ने, दुर्घटना बढी हुने, यात्रुहरूलाई सास्ती हुने, ढुवानी गर्दा सामान बिग्रने आदि–इत्यादि थुप्रै बेफाइदा राज्यलाई मात्र हुन्छ। मूलतः दुर्घटना हुने कारणमा पुराना गाडीहरू जिम्मेवार रहेको विभिन्न बेलामा आउने गरेको प्रतिवेदनहरूमा देखिएको छ। पुराना गाडीहरू, त्यसमा पनि २० वर्ष पुरानो, तिनका पार्टपुर्जा पनि पाइन छाडेको हुन्छ। यस्ता साधनहरू यातायातको अनुकूल नभई कबाडीमा दरिनुपर्दछ। तर हामी नेपालीको त मानसिकता नै कबाडी छ । आज पनि नयाँ भनेर आयात गरिएका गाडीहरू पुराना नै हुन्छन्। उताबाट थोत्रो भएपछि डेन्टिङ–पेन्टिङ गरेर नयाँ पारेर यता पठाइन्छ। यो त भयो सवारी साधनको कुरा, जसमा सरकारको कुनै प्रत्यक्ष दायित्व छैन। सवारी दुर्घटनाको कारण देखाएर यातायात विभागले यस्तो निर्णय गरेको
मधेसवादी दल र ओली सरकारमा सहभागिता
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव राजनीतिशास्त्रका जानकार रूसो, रूबर्ट डाहल, ऐलेन बलका अनुसार शक्ति र वैधताको मिश्रण नै सत्ता हो। हरेक राजनीतिक दलको अन्तिम लक्ष्ण् सता प्राप्ति हो। शक्ति र सत्ता फरक हुन्छ। जनताद्वारा स्वीकृतिप्राप्त मुलुकको संविधान बमोजिम खडा भएको शक्ति सत्ता हो। सैनिक विद्रोह गरेर कुनै सैनिक जनरल शासक बनेपछि ऊसँग शक्ति त हुन्छ तर सत्ता हुँदैन। सत्ताको बृहत् कार्य भनेको निर्णय, नियन्त्रण, समन्वय, अनुशासन, नेतृत्व तथा विकास हो। कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले जनसमर्थन पाउन जनहितमा निर्णय गर्ने, गलत कार्य नियन्त्रण गर्ने, सबैसँग समन्वय गर्ने, मुलुकमा कानुनको शासन वा अनुशासन कायम गर्ने र विकास गर्ने वाचा गरेको हुन्छ। जुन वाचा पूरा गर्नु राजनीतिक दल र नेताहरूको राजनीतिक कर्तव्य एवं धर्म हो। उक्त कर्तव्य सफलतापूर्वक पूरा गर्ने व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बन्छ भने पूरा नगर्ने असफल भएर सखाप हुन्छ। सत्ताच्युत भएर विलयन हुन्छ। जनताको पनि दल र नेतासँग उपरोक्त अनुसारको भूमिकाको अपेक्षा हुन्छ। यसर्थ राजनीतिमा चुनाव जित्नु र सत्ता प्राप्त गर्नु राजनीति गर्नेहरूको अन्तिम लक्ष्य भए पनि
२०७४ फागुन १४ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
स्थानीयको अवरोधपछि पनि सोनबर्सा र देकुली खुला दिसामुक्त घोषित
प्रमोद यादव, रङ्गपुर, १३ फागुन/ पटेर्वा सुगौली गापा–१ सोनबर्सा र वडा नं. २ देकुलीलाई स्थानीयको अवरोधका बावजुद खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। अरुणोदय युवा क्लबले युएन हेभिटासको सहयोगमा साबिक सोनबर्सा गाविस हाल पटेर्वासुगौली गापा–१ र ३ को सोनबर्सा र देकुलीलाई आज खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। स्थानीयले कार्यक्रम शुरु भएपछि खुला दिसामुक्त घोषणा हुन लागेको दुवै वडामा शौचालय नभएको भन्दै शौचालय निर्माणपछि मात्र घोषणा गर्न आग्रह गर्दै कार्यक्रममा अवरोध पु¥याएका थिए। गाउँलेहरूले कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि तयार गरिएको समेना भत्काएका थिए । उनीहरूले वडा नं. १ मा १३१ घरधुरी र वडा नं. ३ मा ४५ घरधुरीमा शौचालय नभएको र विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, तथा गाउँका अति विपन्न, गरिबहरूको घरमा शौचालय नभएको अवस्थामा सार्वजनिक शौचालयसमेत नबनाइएको कारण खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर औपचारिकता पूरा गर्ने काम नगर्न आग्रह गरेका थिए। गाउँलेहरूको अवरोध हटाउन कार्यक्रममा सहभागी गापा उपाध्यक्ष ममता महतोले दुई साताभित्र शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी हालला
अब वाम गठवन्धन रहने छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ —प्रचण्ड
प्रस, रौतहट, १३ फागुन/ राजनीतिक र जनताको मिलनले रौतहटमा चमत्कारजस्तो काम भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले बताएका छन् । सडक बचाउ अभियानद्वारा आयोजित धन्सर–जङ्गलसैया सडक उद्घाटन समारोहमा उनले बोल्दै नेता तथा जनताको सक्रिय योगदानले करिब १४ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा बधाई दिंदै प्रगतिको कामना गरेका थिए । जनताको सहभागितामा उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ भन्ने नेपालको पहिलो उदाहरण बनेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । रौतहटको जनताले पटकपटक सङ्र्घष तथा बलिदान गरी अग्रसर भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए। उनले अब वाम गठवन्धन रहने छैन। नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र रहने छ भने। विभाजनमा परेको कम्युनिस्ट एकीकृत भई जनताको विकासमा लाग्ने बताए। अब कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य सुशासन, विकास र समृद्धि रहने उनले स्पष्ट पारेका थिए। तराई–मधेसको समृद्धि, विकास नभएसम्म नेपालको विकास र समृद्धि हुन सक्दैन भन्दै उनले प्रधानमन्त्री बनेको बेला भारत गएर हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर पहल गरेकोले पहिलो फेजको उद्घाटन केही दिनमा नै हुने बताए। नेपालमा रेलमार्ग
कालिकामाई गापाले निर्णय फिर्ता लियो
प्रस, वीरगंज, १३ फागुन/ कालिकामाई गाउँपालिकाले गरेको मनपरी निर्णय आज बसेको बैठकले खारेज गरेको छ। सो कार्यालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गाडी भाडामा लिने, मोबाइल खरिद गर्नेजस्ता निर्णयको आलोचना हुन थालेपछि बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गाडी भाडा, मोबाइल खरिदजस्ता निर्णय जनचाहनाविपरीत भएको र आलोचना हुन थालेपछि निर्णय बदर गरिएको जनFएका छन्।
जनप्रतिनिधिले गरे गाउँपालिकामा तालबन्दी
प्रस, वीरगज, १३ फागुन/ बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा आज निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा गाउँलेले तालाबन्दी गरेका छन्। सो गापाको सेवा केन्द्र सार्ने विषयमा तालाबन्दी गरिएको नेकपा एमालेका प्रतिनिधि परशुरामप्रसाद यादवले बताए । सो गाउँपालिकाको कार्यालय बहुअर्वाभाटाबाट झौवा सार्न लागेकोमा विरोध गर्दै तालाबन्दी गरिएको हो। बहुवर्वाभाटामा रहेको कार्यालय कुनै हालतमा अन्यत्र जान नदिने अडान राख्दै विरोध कार्यक्रम शुरु भएको छ। वडाध्यक्ष सगीर मियाँ तथा सञ्जय चौहानको नेतृत्वमा गाउँलेहरूले कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरूलाई बाहिर निकाली तालाबन्दी गरेका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीलाल साहले बहुअर्वाभाटाबाट सेवा केन्द्र झौवामा स्थातान्तरण गर्न सहमति जुटाउन गोप्यरूपले निर्वाचित पदाधिकारीहरूको घरघर पुगी सहीछाप गराउन लागेको जानकारी पाएर विरोध गरेको वडाअध्यक्ष सञ्जय चौहानले प्रतीकलाई जानकारी गराएका छन्। त्यसैगरी छिपहरमाई गापामा पनि सेवाकेन्द्र सार्ने विषयलाई लिएर धर्ना शुरु भएको छ। छिपहरमाई गापाको भिस्वामा रहेको सेवाकेन्द्र सारेर सम्भौता लग्ने प्रयास भएपछि स्थानीयहरूले आज चार घण्टा धर्ना दि
निजगढमा चर्चित कलाकारले दर्शकलाइ झुमाए र हँसाए
प्रस, निजगढ, १३ फागुन/ अहिलेका जल्दाबल्दा चर्चित गायक—गायिका र हास्य कलाकारहरूले शनिवार निजगढ गरिएको प्रिहोली कन्र्सटमा तीन हजारभन्दा बढी दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिए। चर्चित युवा गायक दुर्गेश थापाले गीतका शब्दहरूलाई छन्दमा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गर्दै गीत गाउँदा दर्शकहरूले मन थाम्न सकेनन्। देशभक्ति गीतबाट शुरु भएको प्रस्तुतिमा ‘मेरो दिन चोर्नेलाई मुद्दा हाल्दिन्छु’ बोलका गीत गरी ६ वटाभन्दा बढी गीत गाए। समय सांपेक्ष युवाका ढुकढुकीलाई मन जित्ने गरी सिर्जना गरिएका गीत, सङ्गीत र उनको गायकी प्रस्तुतिले माहौल तताएको थियो। त्यसैगरी हास्य टेलिशृङ्खलाबाट चर्चित हुन पुगेका हास्य कलाकार कक्रोज र बलेले पनि पेट मिचीमिची हाँस्न बाध्य तुल्याए। उनीहरूले लगभग आधा घण्टा सम्म दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाए। नेपाली गीत, सङ्गीतको आधुनिक बेसबाट अहिले निकै चर्चित हुन पुगेकी युवा ढुकढुकीकी गायिका मेलिना राईको प्रस्तुतिले पनि दर्शकलाई भरिपूर्ण मनोरञ्जन दियो। चर्चित गीत ‘तिमीले बाटो फे¥यौ अरे’ ‘कुटुमा कुटु सुपारी दाना’ ‘शिरैमा शिरबन्दी कानमा मेरो झुम्का’ ‘कम्मरमाथि पटुकी, पटुकीमाथि घैला’ लगायत आधा द
एन–प्याब्सन टी–२०ः विद्यासदन, ग्रीनल्यान्ड र सालोम विजयी
प्रस, वीरगंज, १३ फागुन/ एन–प्याब्सन पर्साद्वारा नारायणी रङ्गशालामा जारी अन्तरविद्यालय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज तीनवटा खेल भएको खेल संयोजक जगत क्ष्Fत्रीले बताए। जुनियरतर्पm २ र सिनियरतर्पm १ खेलमा विद्यासदन, ग्रीनल्यान्ड र सालोम स्कूल विजयी भएका छन्। पहिलो खेलमा विद्यासदनले माउन्ट हर्मनलाई ७ रन अन्तरले पराजित ग¥यो । पहिलो ब्याटिङ गरेको विद्यासदनले निर्धारित १२ ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ६४ रन बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा माउन्ट हर्मन निर्धारित १२ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ५७ रनमा सीमित रह्यो । यो खेलको म्यान अफ द म्याच राजु महतो घोषित भए। जुनियरतर्पmको दोस्रो खेलमा ग्रीनल्यान्डले वीरगंज गोल्डेन गेटलाई ११ रनले पराजित ग¥यो। निर्धारित १२ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर ग्रीनल्यान्डले पहिलो ब्याटिङ गर्दै ६८ रन जोडेको थियो। वीरगंज गोल्डेन गेट भने ११.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ५७ रनमा सीमित भयो। खेलको म्यान अफ द म्याच अमन अलि घोषित भए। सिनियरतर्पmको खेलमा सालोमले ग्रीनल्यान्डलाई ८ विकेटले पराजित ग¥यो । पहिलो ब्याटिङ गरेको ग्रीनल्यान्ड निर्धारित १५ ओभरमध्ये १३.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ६१
काग कराउँदै छ पीना सुक्दैछ
कागले कराएर पीना सुक्नबाट रोकिंदैन। कागको चिन्ता हो, पीना सुकेर सा¥हो भयो भने खान सकिन्न। पीना नसुने पनि कागले खान सक्दैन। त्यसैले पीनाको सुकाइ र कागको कराइको कुनै तारतम्य मिल्दैन। नेपाल सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ। गण्डक नहररूपी पीना सुकिरहेको छ, सम्बद्ध निकाय, सिंचाइ, उपभोक्ता, सञ्चारमाध्यम दशकौंदेखि कराइरहेका छन्, गण्डक नहरको मरम्मत–सम्भाार समयमा भएन भने भत्कने अवस्थामा पुगिसकेको छ। नहरको जति पनि पक्की संरचनाहरू छन् तिनको चार दशकदेखि मरम्मत सम्भार भएको त छैन नै, नहरमा आवश्यकताभन्दा बढी दबाब भने दिनरात परिरहेको छ। जसले गर्दा साइफन, एक्वेडक्ट, पुलजस्ता कङ्क्रिट संरचना भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। संरचनाको निर्माण कमजोर भएर भत्कन लागेको होइन, न समयमा मरम्मत सम्भार नपाएर भत्कन लागेको हो, अपितु नहरको बाटोले थेग्न नसक्ने भारी सवारी साधनहरू–बस, ट्रक मात्र होइन, हेभी सवारी साधनसमेत चल्दा यस्तो अवस्था आएको हो। नहर निर्माण क्रममा मरम्मत–सम्भारका लागि एउटा पाखालाई सर्भिस रोडको रूपमा विकास गरिएको हुन्छ। त्यसमा सिंचाइको साना सवारी साधनहरू–जीप, कार तथा मिनी ट्रक मात्र चल्ने गर्दछन्। गण्डक
बालबालिकाहरूमा जिद्दीपना र त्यसको प्रभाव
अनन्तकुमार लाल दास एकातिर बालबालिकाहरू घरभित्र वा बाहिर आआप्mनो चाहना पूर्ति गर्न चाहन्छन् भने अर्कोतिर सानोभन्दा सानो असफलता, निराशा र उपेक्षालाई सहन गर्न सक्दैनन्। परिणामतः उनीहरूभित्र रिस उत्पन्न हुन्छ। मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार रिसको यस अवस्थामा बालबालिकाहरूभित्र यस्तो उत्तेजक स्राव बग्न थाल्छ जसबाट शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू उत्तेजित हुन्छन्। परिणामस्वरूप उनीहरूमा जिद्दीपना देखा पर्छ। जिद्दीपनाको सम्बन्ध मनसँग हुन्छ। यसै कारण, चाहनाले वशीभूत भई उनीहरू आप्mनो मनपर्ने वस्तु प्राप्त गर्न खोज्छन् । जिद्दीपनाको अर्को कारण ज्ञानको अविकसित अवस्था हो, जसले उनीहरूभित्र चाहनाको उत्पत्ति छिट्टै हुन्छ र छिट्टै समाप्त पनि हुन्छ। यसकारण जिद्दीपनाको मनोविज्ञान बुझेर उनीहरूको ध्यान त्यसबाट मोडन सकियो भने चाहना सजिलै परिवर्तित गर्न सकिन्छ । प्रश्न उठ्छ, जिद्दीपनाको कारण के हुन् ? यसबारे अध्ययन अवलोकन गर्दा के थाहा हुन्छ भने जिज्ञासु प्रवृत्ति, सामाजिक चाहनासँग सम्बन्ध, मनोरञ्जन, वितृष्णा, आधुनिक प्रगतिशील सोच र वातावरणको प्रभाव, वर्चस्व प्राप्त गर्ने इच्छा र पूरा हुन नसक्ने चाहना आदि यसका प
२०७४ फागुन १३ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंजका अधिकांश आँखा अस्पतालमा चरम लापर्बाही, शल्यक्रियाको माध्यमबाट प्राणघातक रोग बिरामीमा सार्दै
प्रस, वीरगंज, १२ फागुन/ वीरगंजमा रहेका आँखा अस्पतालहरूले उपचारको नाममा जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आँखा शल्यक्रिया गर्दा एचआइभी एड्स तथा हेपाटाइटिस बी जस्ता प्राणघातक रोग एकअर्कामा सार्ने गरेको प्रमाण भेटिएको छ । आँखा शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग हुने केराटोम, कृसेन्ट र साइटपोट ब्लेड उपकरणको माध्यमबाट प्राणघातक रोग सर्ने गरेको पाइएको छ । शल्यक्रियामा प्रयोग हुने तीनवटा ब्लेडको माध्यमबाट एचआइभी र हेपाटाइटिसजस्ता रोग सर्ने गरेको थाहा भएको छ । शल्यक्रियामा प्रयोग हुने ब्लेडबाट बढीमा ५ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गर्ने गरिन्छ । तर वीरगंजमा रहेका आँखा अस्पतालहरूले कुनै पनि प्राणघातक रोगको परीक्ष्Fण नै नगरी मधुमेहको परीक्षण मात्र गरी आँखाको शल्यक्रिया गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ । वीरगंजमा रहेका अधिकांश आँखा अस्पतालमध्ये वीरगंज आँखा तथा दन्त अस्पताल, वीरगंज सामुदायिक आँखा अस्पताल, शिवा आँखा अस्पताल, नेपाल इन्डो आँखा अस्पतालमा आँखा शल्यक्रिया गर्नुअघि प्याथोलोजी चेक गराउनुपर्ने प्रक्रियाबारे बुभ्mदा मुखकै भरमा सोधपुछ गरी वा साधारण रक्त र चिनी चेकजाँच गर
विकासको लागि सडक, सिंचाइ आवश्यक –सांसद साह
प्रस, जीतपुर, १२ फागुन/ “मुलुकको समग्र विकासको लागि सडक एवं सिंचाइको विकास महŒवपूर्ण छ, मुलुक कृषिप्रधान भएको तर सिंचFइको कमीले गर्दा कृषि उत्पादन न्यून भएको छ । बजार अभावले आय आर्जनमा समेत कमी भएको छ । मुलुककै अन्नभण्डार तराईको कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि आवश्यकताबमोजिम सडक र सिंचाइको विकास हुनुपर्छ ।” रौतहट–३ का सांसद तथा पूर्व शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले बारास्थित बङ्गरी नदी सिंचाइ योजना अन्तर्गत प्रसौनी गाउँपालिका–५ प्रस्टोकामा सिंचाइ निमर्Fण कार्यको शिलान्यास गर्ने क्रममा उनले सो कुरा बताए । रु ६ करोड ४२ लाख १७ हजार १ सय ९३ को लागतमा ठेक्का स्वीकृत भएको र सो निमर्Fण कार्य २०७५ कात्तिक १४ गतेसम्म पूरा गर्नुपर्ने कार्यादेश जारी भएको सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बारा, कलैयाका योजना प्रमुख महेश चौधरीले बताए । प्रसौनी गाउँपालिका–५ प्रष्टोकाका वडाध्यक्ष्F बृजकिशोर कुशवाहाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन नेता उमेश कुशवाहाले गरेका थिए । कार्यक्रममा रामाश्रे साहले स्वागत मन्तव्य र माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहा, एमालेका नेता रामपाल यादव लगायतले स्वागत मन्त
एनप्याब्सन टी–२० ः ग्रीनल्यान्ड र विद्यासदन विजयी
प्रस, वीरगंज, १२ फागुन/ नेशनल प्याब्सन पर्साद्वारा जारी अन्तरविद्यालय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको शनिवार सम्पन्न दुई खेलमा जुनियरतर्पm ग्रीनल्यान्ड र सिनियरतर्पm विद्यासदन मावि विजयी भएका छन् । आज भएको पहिलो खेलमा जुनियरतर्पm ग्रीनल्यान्डले सरस्वती स्कूललाई पाँच विकेटले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गर्दै सरस्वती क्लबले निर्धारित १२ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर ६० रन जोडेको थियो । ग्रीनल्यान्ड माविले सो लक्ष्यलाई १०.३ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । यो खेलको म्यान अफ द म्याच इमरान आलम घोषित भए । त्यसैगरी, सिनियरतर्पmको खेलमा पनि विद्यासदनले जिएचपीलाई पाँच विकेटअन्तरले नै पराजित ग¥यो । निर्धारित १५ ओभरको खेलमा सबै विकेट गुमाएर जिएचपीले ८१ रन बनाएको थियो । सो लक्ष्यलाई विद्यासदनले १३.२ ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर पूरा ग¥यो । यो खेलको म्यान अफ द म्याच आसिम हवारी घोषित भए । आइतवार ३ वटा खेल खेलिने प्रतियोगिता संयोजक जगत क्षेत्रीले बताए । जुनियरतर्पm ग्रीनल्यान्ड र वीरगंज गोल्डेन तथा विद्यासदन र माउन्ट हर्मन, सीनियरतर्पm सालोम स्कूल र ग्रीनल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
मेयर कपमा मेयरको टिम विजयी
प्रस, रौतहट, १२ फागुन/ गौरमा शनिवारदेखि मेयर कप क्रिकेट–२०७४ शुरु भएको छ । सो प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा मेयर टिम विजयी भएको छ । मेयर टिमले वडा नं. १ लाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । टस जितेर क्षेत्ररक्षणको निर्णय गरेको मेयर टिमले विपक्षी वडाको टिमलाई १६.४ ओभरमा ५३ रनमा आउट गरेको थियो । ५४ रनको लक्ष्य पाएको मेयर टिमले १३.१ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्दै ७ विकेटअन्तरले विजय भएको हो । ४ विकेट लिएका मेयर टिमका विभास सिंह म्यान अफ दि म्याच घोषित भए ।
कसरी फेरिन्छ २ नम्बर प्रदेशको मुहार ?
ओमप्रकाश खनाल सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले पूर्णता पाएसँगै अब राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने मत बाक्लिएको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य अभीष्टका रूपमा स्थापित गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर मात्र गरेका छैनन्, चुनावलक्षित घोषणामा राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वका बखानहरूको कमी छैन । यसपटक जनताले अर्थराजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा मत प्रकट गरेकोमा द्विविधा रहेन । यो चुनावसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकाले पनि यतिखेरको राजनीतिक पदचापले स्थायित्वका अपेक्षाहरूको पूर्णताको ओज निर्धारण हुनेमा आशङ्का बाँकी छैन । सङ्घीय अभ्यास हाम्रानिम्ति नौलो शासन व्यवस्था मात्र नभएर अवसरसँगै चुनौती पनि हो भन्ने त परिदृश्यले प्रमाणित गरिसकेकै छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशको राजनीतिक आयाम औसतभन्दा भिन्नै छ । बाँकी ६ वटा प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा वामगठबन्धनको वर्चस्व स्थापित भइराखेको अवस्थामा यो प्रदेशमा मधेसवादीको राजनीतिक बोलावाला स्थापित छ । आन्दोलन र क्षेत्रीयता प्रवद्र्धनमा अगाडि देखिएको यो प्रदेशको राजनीतिले विकासका अपेक्षालाई कसरी स
याद राख– जो मनुष्य अरूको कुभलोमा आप्mनो भलो गर्न चाहन्छ, त्यो निकै ठूलो भूलमा छ । आप्mनो सच्चा भलाई, आप्mनो यथार्थ हित त्यसैमा छ, जसमा अरूको भलाइ–अरूको हित भरेको छ । यसै कारण प्रत्येक कर्म गर्नुभन्दा पहिले यो हेर कि यस कर्मको परिणाममा कसैको कुभलो हुँदैन–साथै यो पनि हेर, यस कर्मबाट अरूको भलाइ छ कि छैन । यदि भलाइ छैन भने यो बुझ कि यसमा मेरो पनि भलाइ छैन, त्यस कर्मबाट हात हटाऊ । याद राख– सारा चराचर जगत् भगवान्को नै स्वरूप हो अथवा त्यसमा एक मात्र भगवान् नै व्याप्त छ । र, यो सम्झ सदैव अरूको सेवा यथायोग्य आप्mनो शक्तिले गर । सेवा त्यही हो, जुन सेव्यको लागि सुखदायक र हितकर हुन्छ । विचार गर– जब सबै कुरा भगवान्को हो या सबैमा भगवान् छ, तब पराया को छ ? सबै आत्मा पनि प्रभुको स्वरूप हो–सबै त आप्mनै सेव्य हो, त्यसो भए किन वैर–विरोध, हिंसा–द्वेष या छलकपट गर्ने । कसैको कुनै अनिष्ट गर्ने कल्पना किन गर्ने ? याद राख– सबैमा भगवान् हेर्ने पुरुषको हृदयमा रहने काम–क्रोध, लोभ–मोह, मद–मत्सर, वैर–हिंसा, अहङ्कार–अभिमान आदि शत्रु आपैंm मर्छ । त्यसको हृदय स्वयमेव नै सच्चा सुहृदको काम गर्ने पवित्र त
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्य रोकियो
प्रस, वीरगंज, ११ फागुन/ वीरगंज महानगर–६ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर हुन लागेको निर्माण कार्य वडाध्यक्ष्Fको सक्रियतामा रोकिएको छ । वीरगंज महानगरपालिकालाई झुक्याएर सार्वजनिक सडक अतिक्रमण हुने गरी नक्सासमेत पास गराएर भइरहेको घरनिर्माण कार्यलाई वडाध्यक्ष्F प्रदीप चौरसियाको सक्रियतामा रोकी सार्वजनिक जग्गा खाली गराइएको छ । वडाध्यक्ष्F चौरसियाले प्रहरीसमेतको सहयोगमा सो अतिक्रमण हटाएका हुन् । एक्साभेटर लगाएर निर्माण कार्य शुरु भइरहेको सो स्थानको सम्पूर्ण निर्माण कार्य बन्द भएको छ । सार्वजनिक सडकसमेत अतिक्रमण हुने गरी नक्सा पास गरिएकोमा महानगरपालिकाले पाँचजना कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सार्वजनिक सडक आप्mनो नाममा कायम गर्न जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सो मुद्दा हारेपछिको अवस्थामा महानगरपालिका कर्मचारीले नक्सापास गरेको हुँदा उनीहरूविरुद्ध स्पष्टीकरण सोधिएको हो । स्पष्टीकरणको जवाफ पाँचैजना कर्मचारीहरूले दिएका छन् । तर सो सम्बन्धमा थप कारबाईको बारेमा जानकारी गराइएको छैन ।
ठगी गर्ने भारतीयसहित तीनजना पक्राउ
प्रस, वीरगंज, ११ फागुन/ चिठ्ठामा रू २५ लाख परेको प्रलोभन देखाई ठगी गरेको आरोपमा एक भारतीयसहित तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले आज पत्रकार सम्मेलन गरी भारत, बिहार, पूर्वी चम्पारण कुमरिया बस्ने २० वर्षीय असरफ अलि, सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर–७ बस्ने २४ वर्षीय भीमबहादुर थापा र दैलेख गुराँस गापा–४ बस्ने २२ वर्षीय विष्णु सिंजाली मगरलाई सार्वजनिक गरेको हो । सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस र मोबाइलबाट रू २५ लाखको चिठ्ठा परेको भन्दै ठगी गर्दै आएको सो समूहलाई फागुन ७ गते वीरगंज महानगर–१५ स्थित न्यू वीरगंज मनी ट्रान्सफरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरूबाट नगद रु ४० हजार, मोबाइल, सिमकार्ड, विभिन्न बैंकको भौचर बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि चिठ्ठाको प्रलोभन देखाई ठगी गरेको आरोपमा मङ्सिर १४ गते र पुस ३ गते ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाई गरिसकेको जिप्रका, पर्साले जनाएको छ ।
क्षयरोग निवारण संस्थाको रौतहट अधिवेशन सम्पन्न
प्रस, रौतहट, ११ फागुन/ नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था रौतहटको १६औं वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौं जिल्ला अधिवेशन शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाका केन्द्रीय सदस्य विजयानन्द झाले विधानलाई संशोधन गरी सबै वर्ग समावेश हुने खालको विधान निर्माणका लागि सुझाव केन्द्रीय समितिमा राख्ने बताए । ‘२ हप्ताको खोकी क्षयरोग हो कि ?’ मूल नाराका साथ मनाइएको साधारणसभामा उनले परनिर्भर नभएर हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । अशिक्षा, गरिबी तथा भारतीय सीमासँग जोडिएकोले क्षयरोगीको सङ्ख्या नेपालमा यकिन गर्न नसकिने उनले बताए । कतिपय रोगीले भारतमा उपचार गराइराखेका हुन्छन् भने कतिपयले केही दिन औषधि खाएर छाडेकाले क्षयरोगीको सङ्ख्या यकिन गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । अभियानको रूपमा जनचेतना पैmलाए क्षयरोग उन्मूलन होइन, न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए । नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था रौतहटका अध्यक्ष राजकिशोर राय यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. कृष्णा शाह , उद्योग वाणिज्य सङ्घ रौतहटका अध्यक्ष देवप्रया
एनप्याब्सन अन्तरविद्यालय टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिता, जुनियरतर्फ विद्यासदन र वीरगंज गोल्डेन, सिनितर्फ सालोम विजयी
प्रस, वीरगंज, ११ फागुन/ नेशनल प्याब्सन पर्साद्वारा नारायणी रङ्गशालामा जारी अन्तरविद्यालय टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रवार पनि जुनियरतर्पm २ र सीनियरतर्पm १ गरी तीनवटा खेल सम्पन्न भए । आज सम्पन्न खेलमा जुनियरतर्पm विद्यासदन र वीरगंज गोल्डेन गेट विजयी भए भने सिनियरतर्पm सालोम मावि विजयी भएको खेल संयोजक जगत क्षेत्रीले जानकारी गराए । प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा वीरगंज गोल्डेन गेटले ओसिस स्कूललाई ४ रनअन्तरले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गर्दैै वीरगंज गोल्डेन गेटले निर्धारित १२ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ७० रन जोडेको थियो । प्रतिउत्तरमा ओसिस १२ ओभरमा ३ विकेट गुमाइ ६६ रनमा सीमित भयो । यस खेलको म्यान अफ द म्याच सरफराज अन्सारी भए । जुनियरतर्पmकै दोस्रो खेलमा विद्यासदनले जिएचपीलाई ३१ रनअन्तरले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गर्दै विद्यासदनले १२ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ८० रन जोडेको थियो । प्रतिउत्तरमा जिएचपी १२ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ४९ रनमा सीमित रह्यो । यस खेलको म्यान अफ द म्याच समी अन्सारी घोषित भए । सिनियरतर्पmको खेलमा सालोमले होलील्यान्डलाई ४१ रनअन्तरले पराजित ग¥यो । पहिले ब्य
उमाशङ्कर द्विवेदी त्यति बेला तिमीलाई बडो सन्ताप हुनेछ र जुन प्रकारले पुण्यहीन व्यक्तिले स्वर्गप्राप्तिको आशा छाडिदिन्छ, त्यसै प्रकार तिमीलाई पृथ्वीको राज्य पाउने आशा भङ्ग हुनेछ । त्यसैले तिमी शान्त भइहाल है । यस प्रकार दुर्योधनको सन्देश लिएर उलूक पाण्डवहरूको शिविरमा आएर पाण्डवहरूसित भेटी राजा युधिष्ठिरसित भन्न थाल्यो– तपाईं दूतको वचनसित परिचित नै हुनुहुन्छ । त्यसैले जुन प्रकारले मलाइ भनी पठाइएको छ, त्यसै प्रकार दुर्योधनको सन्देश सुनेर क्रोधित नहुनुहोला । युधिष्ठिरले भने– तिम्रोलागि भयको कुनै कुरा छैन । तिमीले नडराइ अदूरदर्शी दुर्योधनको सन्देश सुनाऊ । उलूकले भन्यो– महामना, दुर्योधनले सबै कौरवहरूको सामु तपाईंको लागि जुन सन्देश दिएका छन्, त्यो सुन्नुहोस्–पाण्डवहरू, तिमीहरू राज्यहरण, वनवास र द्रौपदीको उत्पीडनको कुरा सम्झेर मर्द बन । भीमसेनले सामथ्र्य नहुँदाहुँदै पनि जुन यस्तो सर्त राखेको थियो कि म दुःशासनको रगत पिउनेछु, लौ तागत् छ भने रगत पिउन् । अस्त्रशस्त्रहरूमा देउताहरूको आवाहन भइसकेको छ, कुरुक्षेत्रको हिलो पनि सुकिसकेको छ र बाटो पनि प्रशस्त भइसकेको छ, त्यसैले अब श्रीकृष्ण